GFFM (Gideona Fandresana ny Fahantrana eto Madagasikara) - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
10 janvier 2012 admin
Tao aorian’ny nitsanganan’ny antoko politika izay noforonin’ny pasitera Mailhol dia maro ny fanontaniana manitikitika ny maro. Nisy araka izany ny fihaonan’ny antoko Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara na GFFM tamin’ny mpanao gazety tamin’ity androany ity. “Hita fa mihamakany amin’ny fahatanterahany ny faminaniana izay manambara fa ho filoham-pirenena Malagasy ny pasitera Mailhol amin’ny taona 2013. Tsy miaraka ihany koa ny politika sy ny ny fiangonana”. Noho izany indrindra hoy ny pasitera Mailhol no nananganana ny antoko politika Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (Gedeon pour vaincre la pauvreté à Madagascar) na GFFM. Nambaran’andriamatoa Rakotovao ANDRIAMPARANY, filoha nasionalin’ity antoko ity, fa efa vonona amin’izay fifidianana mety hisy eo izy ireo.
Nohamafisin’ny pasitera Mailhol anefa fa tsy miova ny voalazany fa apetraka eo amin’ny fitondrana izy ary avy eo vao milatsaka ho fidiana amin’izay fifidianana manaraka eo. Notsindriany ihany koa fa na fitsapak’evi-bahoaka izay fifidianana handraisany anjara izay na fifidianana filoham-pirenena. Tanjona kendren’ny antoko voalohany indrindra ny ady amin’ny fahantrana sy ny kolikoly, ny fampiakarana ny arikarena fahoben’ny firenena Malagasy, ary ny hahatsapan’ny vahoaka Malagasy izany fiakaran’ny harikarena fahobe izany eo amin’ny fiainany andavan’andro. Raha eo anivon’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena kosa dia ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ao anatin’ny fanatotoloana no kendren’izy ireo. Mandray fanampiana ihany koa anefa ny GFFM mba hialan’ny firenena Malagasy ao anatin’ny fahantrana fa tsy ahatonga ny firenena ho be trosa indray. Ankoatra izay dia nambaran’ny pasitera Mailhol hatrany fa tsy manohitra ny fitondrana tetezamita ny antoko GFFM, ary tsy miandany na amin’iza na amin’iza. Misokatra ho an’ny olona rehetra izy ireo fa tsy natao ho an’ny mpikambana Apokalypsy ihany. “Ho an’ny Malagasy, ho an’i Madagasikara”rahateo no filamatra noraisiny.
Mbola nohamafisin’andriamatoa Rakotovao ANDRIAMPARANY ihany koa izany, izay marihina fa tsy mpivavaka ao amin’ny fiangonana Apokalypsy ny tenany. Efa miparitaka manerana ny faritra 22 eto Madagasikara ny GFFM ary efa misy ihany koa ny fikambanan’ny Jeune GFFM. “Tsy mitondra ny fiangonana Apokalypsy intsony aho rehefa tonga eo amin’ny fitondrana fa efa maro ny pasitera eo anivon’ny fiangonana no afaka misolo ahy”. Hoy ny pasitera Mailhol raha nanontaniana izy ny amin’ny toerana maha pasitera azy raha tonga eo amin’ny fitondrana izy. Raha ny fidiram-bolan’ity antoko ity dia nambaran’ny pasitera Mailhol mazava fa ny tsipaipaika ataon’ny mpikambana tsirairay no ahazoan’izy ireo izany fa tsy misy hifandraisany amin’ny fiangonana Apokalypsy. Ho an’izay liana ny hiditra ho mpikambana ao anatin’ity antoko GFFM ity dia afaka manatona ny foibeny ao amin’ny Lot 3J53 Soanierana.
Hijery ny resadresaka feno ao amin’ny Youtube
Publié dans Ireo Vaovao, Vaovao SamihafaÉtiqueté avec apokalypsy, fahantrana, gffm, malagasy, mpaminany, politika